Hlwan Paing MP3 Download | MP3 Free Download All Songs
Hlwan Paing Album & Songs - Play Hlwan Paing songs online at Joox, Best of Hlwan Paing and greatest hit album by Myanmar - Hip hop singer are now online streaming. Listen to your favourite Hlwan Paing singles, and hit songs now! Hlwan Paing သည် ၁၉၈၉ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။သူဟာလူသိများတဲ့မြန်မာအဆိုတော် ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ၊ သီချင်းရေးသူ ၊ သရုပ်ဆောင်နှင့်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်။သူသည်ပွဲဦးထွက်အတွဲအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည့် ဒုံးပျံတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ထွက်ရှိခဲ့သော အယ်လ်ဘမ်များ ဒုံးပျံ (2011) ဂီတစာဆို (2014) ဂီတဗေဒ (2017) Ref : wikipedia
Yee Ser Haung28 Jul 2020
နွေအလွမ်း9 May 2020
မျှော်နေမယ်ဆောင်း23 Dec 2019
အူတွေအသဲတွေယား21 Dec 2019
ကြည်ဖြူမယ်ဆိုရင်2 Jul 2019
WISH YOU HAVE A BETTER DAY15 Jun 2019
About Hlwan Paing
Hlwan Paing Album & Songs - Play Hlwan Paing songs online at Joox, Best of Hlwan Paing and greatest hit album by Myanmar - Hip hop singer are now online streaming. Listen to your favourite Hlwan Paing singles, and hit songs now!
Hlwan Paing သည် ၁၉၈၉ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။သူဟာလူသိများတဲ့မြန်မာအဆိုတော် ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ၊ သီချင်းရေးသူ ၊ သရုပ်ဆောင်နှင့်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါသည်။သူသည်ပွဲဦးထွက်အတွဲအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည့် ဒုံးပျံတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။